ILebhu iComms iququzelela ukuthetha esidlangalaleni kumaqonga ahlukeneyo | Language Centre
Posted on 03/09/2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news
Ukuthetha esidlangalaleni sisakhono esingafundwa de ube yingcaphephe kuso! Ngowe-8 Agasti, iLebhu iComms yeZiko leeLwimi kunye neStellenbosch Toastmaster Club zabambisana ngokusindleka intlanganiso yokulinganisa iinjoli zemicimbi kunye neseshoni yolwazi kwigumbi leeSemina leZiko leeLwimi. Eli yaba lithuba lakhe nabani na ukubona ngokunokwakhe ukuba ezi Njoli zemicimbi ziyiphatha njani: Kwakukho iintetho ezilungisiweyo, uvavanyo neentetho ezingalungiselelwanga ezenziwa ngemilo enesakhelo sentlanganiso yeeNjoli zemicimbi.
I-Toastmasters International ngumbutho ongenzi nzuzo wemfundo ofundisa izakhono zokuthetha esidlangalaleni nezobunkokheli ngokusebenzisa uthungelwano lweeklabhu kwihlabathi jikelele. Ubunjoli kwimicimbi kumalunga nokuziphuhlisa ngokwakho usebenzisa isantya sakho kwindawo ekhuselekileyo nekhuthazayo. Ngokukamongameli weklabhu, uZimbili Sibiya, “Siyintlangano enobubele neyamkelayo nalapho amandwendwe anganyanzeliswayo ukuba athabathe inxaxheba nangayiphi na indlela ngaphandle kokuba ngabaqwalaseli kuphela – awusayi kuhlaziswa tu!” Le ntlanganiso yazinyaswa ngabantu abaqalayo ukulibeka inyawo apha abangaphezu kwama-30. Ukuba ungathanda ukuzimasa intlanganiso elandelayo yeeNjoli zemicimbi, thumela i-imeyili ukuze ufumane ulwazi oluthe vetshe.
ILebhu iComms yeZiko leeLwimi (iLebhu yoNxibelelwano) isoloko ikhangela amaqabane – anjenge- Toastmasters – ukongeza kwizifundo zoqeqesho lonxibelelwano kumaqumrhu. Iikhosi zeLebhu iComms ziyasebenziseka kwaye zinonxibelelwano kwaye ziyilwe ngokwezidingo ezikhethekileyo. Iiseshoni zobuso ngobuso zosuku olupheleleyo zixokonyezelelwa ngokufunda kwi-intanethi, ukuze kubekho inzuzo enkulu nethuba elilungele oosomaqhuzu okanye abalawuli beeofisi abaxakekileyo. Xa ubani eyigqibe ngempumelelo ikhosi, uwongwa ngesiQinisekiso sesaKhono.
ILebhu iComms ikwajolise ekwakheni ubudlelwane bexesha elide nabathabathi-nxaxheba bayo. “Ukuba oku kuyasebenza sikubona ngothotho lwabathabathi-nxaxheba abaphinda babhalisele ezinye iikhosi zethu. Ukubalula nje abambalwa, sibe nabantu abavela eMediclinic, eICLEI, eNKC, kwiRupert Foundation, iAlphawave, iUSB neGraham Beck Wines abazimase ezi khosi kulo nyaka,” ucacise ngelo umququzeleli weLebhu iComms, uMichelle Pieters.
“Kuyakhuthaza ukubona ubani ephuhla efikelela kwinyathelo elilandelayo kwihambo yakhe eya kwimfezeko epheleleyo. Enye yeenkwenkwezi zethu kutshanje nguSello Sekele, ongusoqoqosho osaqeqeshwayo omncinane nochulumancileyo okwi-Bureau for Economic Research eStellenbosch.” NgoAgasti, uSello wazimasa ikhosi emfutshane yeLebhu iComms ekuthiwa yi-Crafting confident presentations neyayisenziwa nguEduard de Klerk, ongumsasazi kunomathotholo, umPhathi-miCimbi onamava nokwayitoliki. “Le khosi isebenzisekayo nenonxibelelwano incede uSello ukuba afumane izakhono zokuzithemba nokuthetha esidlangalaleni nokuthabathekisa oogxa bakhe kangangokuba endixelela oko!” utshilo uMichelle. Uqhube kakuhle, Sello!
Ukuba ufuna ukulola izakhono zakho zokunxibelelana njengengcaphephe, thetha noMichelle ngokuthumela i-imeyili ukufumanisa ukuba angakunceda kanjani.
Language CentreArticles in isiXhosa Dialogos Our languages Recent newsILebhu iComms iququzelela ukuthetha esidlangalaleni kumaqonga ahlukeneyo